Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (dhashay 3 Janaayo 2003) waa dhaqdhaqaaqe u ololeeya arrimaha deegaanka Iswidishka oo helay aqoonsi caalami ah oo ku aaddan dhiirrigelinta aragtida ah in bani'aadamnimada ay soo food saartay dhibaato jirta oo ka dhalatay isbedelka cimilada. Thunberg waxaa lagu yaqaanaa dhallinyarnimadeeda iyo qaabkeeda toosan ee hadalka, dadweynaha iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo goleyaasha, taas oo ay ku dhaleeceyneyso hoggaamiyeyaasha adduunka guuldarrooyinkooda inay qaadaan tallaabo ku filan oo wax looga qabanayo dhibaatada cimilada.
Firfircoonida Thunberg waxay bilaabatay kadib markay waalidkeed ku qancisay inay qaataan dhowr hab nololeed si loo yareeyo raadkooda kaarboonka u gaarka ah. Bishii Ogast 2018, markay ahayd 15 jir, waxay bilawday inay maalmaheeda iskuulka ku qaadato banaanka baarlamaanka Sweden si ay ugu baaqdo in tilaabo adag laga qaado isbedelka cimilada iyada oo haysa calaamad ay ku qoran tahay Skolstrejk för klimatet (Iskuulka ku saabsan cimilada) Dhawaan, ardayda kale waxay ku kaceen mudaaharaadyo la mid ah beeshooda. Isku soo wada duuboo, waxay abaabuleen dhaqdhaqaaq shaqo joojinta cimilada ee iskuulka iyagoo wata magaca Jimcaha ee Mustaqbalka. Ka dib markii Thunberg uu ka hadlay shirkii 2018 ee Isbadalka Cimilada ee Qaramada Midoobay, shaqo joojinta ardayda ayaa ka dhacday toddobaad kasta meel adduunka ka mid ah. Sannadka 2019, waxaa jiray dibad-baxyo isku-dubbaridday magaalooyin fara badan oo ay ku lug lahaayeen in ka badan hal milyan oo arday kasta. Si looga fogaado duulimaadka, Thunberg waxay u dhooftay Waqooyiga Ameerika halkaas oo ay kaga soo qaybgashay Shir-hawleedka Cimilada Adduunka ee UN-ka 2019. Khudbaddeedii ay halkaas ka jeedisay, oo ay ku dhawaaqaysay "sidee ku dhiirran tahay", ayaa si ballaadhan loogu qaadaa dhigay saxaafadda oo lagu daray muusikada.
Markii ay ku soo booday sumcaddeeda adduunka waxay ka dhigtay iyada hoggaamiye iyo bartilmaameed dhaliil. Saamaynta ay ku leedahay masraxa adduunka ayay The Guardian iyo wargeysyada kale ku tilmaameen "saamaynta Greta". Waxay heshay maamuusyo iyo abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin: Sharafeyn Sharafeedka Jaaliyadda Juquraafiga ee Royal Scottish; 100ka qof ee ugu saameynta badan majaladda Time iyo qofka ugu da'da yar Qofka sanadka; ka mid noqoshada liiska Forbes ee Haweenka Adduunka ugu Awooda badan (2019) iyo laba magacaabis oo isku xigta oo loogu talagalay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel (2019 iyo 2020).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Greta_Thunberg&oldid=206133"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Oktoobar 2020, marka ee eheed 07:36.